२ करोड सकियो तर ‘यात्रा’ को सुटिङ सकिएन ! – आफ्नो समाचार
२ करोड सकियो तर ‘यात्रा’ को सुटिङ सकिएन !
Afno News — ६ भाद्र २०७५, बुधबार २०:०४0comment
सबैभन्दा लामो समयसम्म सुटिङ भएको नेपाली फिल्म कुन होला ? झट्ट सम्झन गाह्रो छ । अब एउटा नाम भने जो कोहीलाई याद हुँदैछ । फिल्म हो- ‘यात्रा’ । ‘ए मेरो हजुर २’ फेम्ड अभिनेता सलिनमान बनियाँ जोडिएका कारण पनि यो फिल्मको दर्शकमा व्यग्र प्रतिक्षा छ ।
तर, फ्लोरमा निस्किएको तीन महिना भइसक्दा पनि फिल्मको सुटिङ अझै सकिएको छैन । प्रायः नेपाली फिल्मको सुटिङ सेड्युल एक महिनाको हुन्छ । तर, ‘यात्रा’ को भने सुटिङ कहिले सकिन्छ अझै अन्योलमा छ ।
निर्माता केशव भट्टराई लगातार परिरहेको पानीका कारण फिल्मको छायांकन लम्बिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मौसमका कारण फिल्मको सुटिङ लम्बिएको हो । अब १० दिनको सेड्युल बाँकी छ ।’ उनले शनिवारबाट फिल्मको बाँकी छायांकन सुरु हुने बताए ।
निर्माता भट्टराईले सुटिङ लम्बिँदा बजेट बढेको स्विकार गरे । रिलिज हुँदासम्म २ करोड ५० लाख सकिने उनको अनुमान छ । हालसम्म सुटिङमा करीब २ करोड चैट भइसकेको छ । बजेट बढ्नुको दोष कसैलाई दिन नमिल्ने उनको भनाई छ ।
यो फिल्मबाट सम्राट शाक्यले निर्देशनमा हात हालेका छन् । यसअघि उनले दर्जनौ फिल्ममा ‘एसोसियट डाइरेक्टर’ भएर काम गरेका थिए । फिल्मको सुटिङ लम्बिनुको पछाडि निर्देशक नयाँ भएको मानिएको छ ।
निर्माता भट्टराई भने यो कुरा स्विकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘२५ वर्षदेखि फिल्म इन्डष्ट्रीमा लागेको व्यक्ति कसरी नयाँ हुन्छ ? भएभरका निर्देशक बनाउने व्यक्ति हो ऊ । निर्देशकका कारणले फिल्मको छायांकन लम्बिएको होइन । मौसम हो प्रमुख बाधक ।’
७२ दिन क्यामेरा अन भइसकेको फिल्मको अब १० दिनमा सम्पूर्ण छायांकन भ्याइनेमा उनी विश्वस्त सुनिन्छन् । फिल्मको सुटिङ लम्बिए पनि कलाकारबाट कुनै गुनासो सुन्नु नपरेमा उनी खुसी छन् । ‘कलाकार र प्राविधिकले हुनसक्ने काम गरेका छन् । मौसमले मात्र हामीलाई गाह्रो बनाएको हो’, उनले भने ।
‘यात्रा : अ म्युजिकल भ्लग’ मा सलिनमानको जोडी नव-अभिनेत्री मल्लिका महतसँग बाँधिएको छ । सलोन बस्नेत, जान्वी बस्नेत, जयनन्द लामा, रेअर राई, प्रेक्षा बज्राचार्य, धिरेन शाक्यलगायतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय छ ।
अस्पताल गएकी छोरी फर्कदा छोरा !